समाचार - RUGAO PACKER MACHINERY CO।, LTD
घरपालुवा बोतल धुने लाइन, घरपालुवा बोतल धुने प्रक्रिया
घरपालुवा बोतल धुने लाईनमा दुई प्रकारका सम्पूर्ण बोतल धुने प्रक्रियाहरू छन्, ब्याच धुने र निरन्तर खुवाउने र डिस्चार्ज गर्ने काम। दुई डिजाइन अवधारणा र संरचना मा धेरै फरक छन्।
किन pp खाली पाना प्रयोग गर्नुहुन्छ?
पीपी खाली पाना ऊर्जा बचत र वातावरणीय अनुकूल सामग्रीको एक नयाँ प्रविधि हो। यो अनुप्रयोगको एक विस्तृत श्रृंखला र एक लामो सेवा जीवन छ। यो नालीदार कार्डबोर्डको सेवा जीवन भन्दा to देखि ११ गुणा लामो छ। यो पुन: प्रयोग र पुन: प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नालीदार प्लास्टिक भनेको के हो?
नालीदार भवन निर्माण सामग्रीको संरचना हो, जुन विभिन्न सामग्रीहरूको संयोजनको साथ बनाउन सकिन्छ। नालीदार प्लास्टिक एक polypropylene प्लास्टिक बोर्ड उत्पादन हो। योसँग कोरुगेटेड फाइबरबोर्ड, हल्का वजन, कडा सामग्री, र प्रयोग गर्न सजिलो जस्ता समान गुणहरू छन्।
अपरेटि procedures प्रक्रियाहरू र प्लास्टिक shredder को उत्पादन सावधानी
यो काम गरिरहेको बेला प्लास्टिक shredder को सँधै प्लास्टिक shredder को अपरेटिंग सर्तहरु मा ध्यान दिनु पर्छ। यदि कम्पन, आवाज, असर र शरीरको तापक्रम धेरै उच्च पाइएको छ भने यो निरीक्षणको लागि तुरून्त बन्द गरिनुपर्दछ, र कार्य जारी राख्नु अघि दोष हटाउनुपर्नेछ।
के यो प्लास्टिक पाइप वा हार्ड प्लास्टिक क्रस गर्न प्रयोग गरीन्छ? प्लास्टिक shredder को तीन मोडेल
प्लास्टिक क्रेशरहरू सामान्यतया बिभिन्न प्लास्टिक र रबर्स क्रसिंगको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो गोलीहरू सीधा बाहिर निकाल्न को लागी आपूर्ति गर्न सकिन्छ। उत्पादनको लागि कच्चा मालको रूपमा, त्यहाँ विभिन्न क्रसिंग आवश्यकताहरू अनुसार प्लास्टिक क्रेशरको मुख्यतया तीन मोडेलहरू छन्।
पीईटी बोतल क्रेशरको अनुप्रयोग
पीईटी बोतल क्रेशर मुख्य रूपले विभिन्न प्लास्टिकको प्लास्टिक र रबर्सहरू जस्तै प्लास्टिक प्रोफाइलहरू, ट्यूबहरू, डण्डहरू, रेशम धागोहरू, फिल्महरू, र फोहर रबर उत्पादनहरू क्रश गर्न प्रयोग गरिन्छ।